ခေါ်ဆိုခရုပ်သံလိုင်း YUTUBE အဖြစ် - YOUTUBE ကို - 2019
Mailer အဆိုပါ Bat အသုံးပြုတဲ့အခါ! သငျသညျကိုမေးလိမ့်မယ်: က mailer "ခြံ" ဘယ်မှာသင့်ကွန်ပျူတာ၏ hard drive ကိုဆာဗာကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်စာအပေါ်တိကျတဲ့ဖိုင်တွဲနားလည်သဘောပေါက်သည်, သည် "ဘယ်မှာ program ကိုစတိုးဆိုင်များအားလုံးအဝင်မေးလ်ဖြစ်ပါတယ်" ။
ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဒီမျိုးကိုရိုးရှင်းစွာအဘယ်သူမျှမကမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့။ အများစုမှာဖွယ်ရှိ, သင် client ကိုဒါမှမဟုတ် operating system-install ပွီ, ယခုမေးလ်ဖိုလ်ဒါရဲ့ contents recover ချင်တယ်။ ဒီတော့ရှိရာအရေးအသား၏ "မုသား" နှင့်မည်သို့မည်ပုံသူတို့ကို restore မှကြည့်ရှုကြကုန်အံ့။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: တက် Set က e-mail ကို client ကိုအဆိုပါ Bat!
အဘယ်မှာတိုင်အဆိုပါ Bat များမှာ!
"ကြွက်" အများဆုံးကတခြား mailers ကဲ့သို့တူညီသောလမ်းအတွက်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာမေးလ်ဒေတာနဲ့အလုပ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင် configuration file များ, အီးမေးလ်အကောင့်ရဲ့ contents များနှင့်လက်မှတ်များကိုသိမ်းဆည်းထားတဲ့အသုံးပြုသူရဲ့ပရိုဖိုင်းကို, အောက်မှာ folder တစ်ခုဖန်တီးပေးပါတယ်။
တောင်မှဒီ Bat ၏ installation စဉ်အတွင်း! မေးလ် directory ကိုနေရာဘယ်မှာသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ နှင့်သင့်လျော်သောလမ်းကြောင်းကိုလျှင်သင်ထို့နောက်အစီအစဉ်ကို default option ကိုအသုံးပြုသတ်မှတ်ထားသောကြပြီမဟုတ်:
ကို C: အသုံးပြုသူအမည် Users AppData Roaming အဆိုပါ Bat!
မေးလ် directory ကိုအဆိုပါ Bat ကိုသွားပါ! ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သေတ္တာများ၏အမည်များနှင့်အတူတစ်ဦးသို့မဟုတ်ပိုပြီးဖိုလ်ဒါ mark ။ သူတို့ဟာအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ဒေတာသိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်အီးမေးလ်ကို-profile များကို။ ထိုသို့ကောင်းစွာစာ။
ဒါပေမဲ့ဒီဒါရိုးရှင်းမဟုတ်ပါဘူး။ Mailer သီးခြားဖိုင်ထဲတွင်တစ်ခုချင်းစီစာတစ်စောင်သိုလှောင်မထားဘူး။ အဝင်နဲ့အထွက်မေးလ်များအတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဒေတာဘေ့စရှိပါတယ် - မော်ကွန်းတိုက်တူတစ်ခုခု။ ဒါကြောင့်အထူးသဖြင့်မက်ဆေ့ခ်ျကို restore လုပ်ဖို့သင်အောင်မြင်ကြဘူး - ဒါကြောင့်အားလုံးစတိုးဆိုင် "restore" ရန်လိုအပ်ပေသည်။
ဤလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ရန်, သွားပါ"Tools" - "သွင်းကုန်ပေးစာ" - "သင်၏မေးလ်အဆိုပါ Bat မှစ. ! v2 (.TBB) ».
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌ "Explorer ကို" ဖိုင်တွဲမေးလ်ပရိုဖိုင်းကိုရှာဖွေ, သူ့ catalog ထဲမှာ « IMAP ကို».
ဤတွင်, keyboard shortcuts တွေကိုများ၏အကူအညီဖြင့် « CTRL + A » ဖိုင်တွေအားလုံးကို select လုပ်ပြီးကိုကလစ်နှိပ်ပါ"ပွင့်လင်း".
ထိုနောက်မှသာသူတို့ရဲ့မူရင်းအခြေအနေမှ e-mail, client ကို databases ကို၏ပြောင်းလဲခြင်းများပြီးစီးမှုအတွက်စောင့်ဆိုင်းနိုင်ပါတယ်။
ကို back up နှင့် The Bat အတွက်အီးမေးလ်များကို restore လုပ်နည်း!
သင်ဟာ Ritlabs ထံမှ mailer-install ရှိသည်ဟုဆိုသညျကားနှင့်မေးလ် directory ကိုအသစ်တစ်ခု folder ကိုသတ်မှတ်ကြပါစို့။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရအက္ခရာများကိုအလွယ်တကူပွနျလညျထူထောငျနိုငျသညျ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ရိုးရှင်းစွာအသစ်တစ်ခုကိုလမ်းကြောင်းပေးဖို့ဆန္ဒရှိစာတိုက်ပုံးအချက်အလက်ဖိုင်တွဲကိုရွှေ့။
ဒီနည်းလမ်းကိုပြုလုပ် built-in data ကို backup လုပ်ထား function ကိုအသုံးပြုနိုင်သည် သာ. ကောင်း၏ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများမှကာကွယ်ရန်လုပ်ဆောင်နေသည်ဟူသောအချက်ကိုနေသော်လည်း။
ကျွန်တော်အခြားကွန်ပျူတာဖို့လက်ခံရရှိမေးလ်လွှဲပြောင်းနှင့်သူမ၏နှင့်အတူနှင့် The Bat ၏အကူအညီနှင့်အတူရှိအလုပ်လုပ်ချင်ဆိုပါစို့! ကောင်းပြီ, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးစနစ်ပြန်လည်အခါစာလုံးတွေရဲ့ contents ၏သမာဓိသေချာစေရန်အလိုရှိ၏။ နှစ်ဦးစလုံးကိစ္စများတွင်, သင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖိုင်ထဲမှာတင်ပို့ function ကိုသုံးနိုင်သည်။
သွားပါ "Tools" - "ပို့ကုန်ပေးစာ" .MSG သို့မဟုတ် .EML - ကျနော်တို့လက်ျာ format ကို backup လုပ်ထားကိုရွေးချယ်ပါ။
ထို့နောက်ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, file ကိုသိမ်းထားဖို့ folder ကိုသတ်မှတ်နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
ဒီ backup လုပ်ထားအီးမေးလ်များကိုအဆိုပါ Bat,! ဥပမာ, တင်သွင်းအခြား PC ပေါ်မှာ install လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ပြီးနောက်။
ဒါက menu ကတဆင့်ပြု "Tools" - "သွင်းကုန်ပေးစာ" - စာလုံး "ဒီဖိုင်တွေ (.MSG / .EML) ».
အဲဒီမှာရိုးရိုးပြတင်းပေါက်၌သင်လိုချင်တဲ့ဖိုင်ကိုတွေ့ပါ "Explorer ကို" နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပွင့်လင်း".
ရလဒ်အဖြစ် backup လုပ်ထံမှစာတစ်စောင်အပြည့်အဝပွနျလညျထူထောငျရလိမျ့မညျနှင့်သင့်မေးလ်အကောင့်မူရင်းတည်နေရာမှာထားလေ၏။
ဗီဒီယို Watch: KDA - POPSTARS ft Madison Beer, GI-DLE, Jaira Burns. Official Music Video - League of Legends (နိုဝင်ဘာလ 2019).